Kth ထပ်တလဲလဲမရှိသောအက္ခရာ Kth ထပ်ခါတလဲလဲမရှိသောအက္ခရာ TutorialCup
ပင်မစာမျက်နှာ » နည်းပညာဆိုင်ရာအင်တာဗျူးမေးခွန်းများ » String အင်တာဗျူးမေးခွန်းများ » Kth Non- ထပ်ကျော့ဇာတ်ကောင်
Kth Non- ထပ်ကျော့ဇာတ်ကောင်
မကြာခဏမေးတယ် အမေဇုံ Apple ဘလွန်းဘာ့ဂ် Facebook က Goldman Sachs Google Microsoft က Oracle က Zillow
Tags: hash တားဆီးခြင်း HashMap ကြိုး
C ++ ထပ်မံမွမ်းမံထားသောအက္ခရာကိုရှာဖွေရန်အစီအစဉ်
Kth Non-Repeating Character ကိုရှာဖွေရန် Java Program
ရှုပ်ထွေးမှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း Kth Non-repeatating Character
“ Kth ထပ်တလဲလဲမရှိသောအက္ခရာ” တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်aကြိုး “ s” ။ kth non-repeating_character ကိုရှာဖွေရန် program တစ်ခုရေးပါ။ အကယ်၍ k ထက်နည်းပါက string တွင်ထပ်ခါတလဲလဲမလုပ်ပါက“ -1” ကိုရိုက်ပါ။
"s" string ကိုပါရှိသောပထမ ဦး ဆုံးနှင့်တစ် ဦး တည်းလိုင်း။
kth non-repeating_character ကိုကိုယ်စားပြုသော a_character ပါဝင်သောပထမနှင့်တစ်ကြောင်းတည်း။ အကယ်၍ k ထက်နည်းပါက string တွင်ထပ်ခါတလဲလဲမလုပ်ပါက“ -1” ကိုရိုက်ပါ။
ရှင်းလင်းချက်: ဒီနေရာမှာ freq [t] က 2၊ freq [u] က2ဖြစ်ပြီးကျန်ကျန်တဲ့ char တွေမှာ freq 1. ရှိတယ်။ ဒါကြောင့် Kth-repeating_character သည် "or".
1. အက္ခရာအရေအတွက်ကိုသိမ်းဆည်းထားရန် count array တစ်ခုဖန်တီးပါ။
2. ထပ်ခါတလဲလဲမဟုတ်သောစာလုံးများ၏အညွှန်းကိုသိမ်းဆည်းရန် index array တစ်ခုဖန်တီးပါ။
3. 'x' စာလုံးသည် index store အတွင်းရှိ string store n တွင်ထပ်ခါတလဲလဲသို့မဟုတ်မပါရှိပါက။
4. count array အားသုညနှင့် index array ခင်းပါ။ (n သည်ကြိုး၏အရှည်ဖြစ်သည်)
5. input ကို string ကို x = str [i] ဖြတ်သန်း
6. အတိုးအရေအတွက် [x]
7. count က [x] = 1, ထို့နောက်အညွှန်းကိန်း၌ x ၏အညွှန်းကိန်းသိုလှောင် [x] ။ အညွှန်းကိန်း [x] = ဈ
8. count က [x] =2လျှင်, အညွှန်းကိန်းကနေ x ကိုဖယ်ရှား  ။ အညွှန်းကိန်း [x] = n ။
9. index array ကိုစီပါ။
10 ။ Index [k] သည်ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ခြင်းမဟုတ်သော kth ဖြစ်သည်။
int freq = new int ;
int index = new int ;
အို (ဎ) ဘယ်မှာ n ပေးထားသောခင်းကျင်း၏အရွယ်အစားဖြစ်ပါတယ်။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပေးထားသော string“ s” ကိုဖြတ်ပြီးဇာတ်ကောင်တစ်ခုစီ၏ကြိမ်နှုန်းကိုသာတွက်ချက်သည်။ စဉ်ဆက်မပြတ်အချိန်အတွက်လိုအပ်သောအဖြစ်ထို့နောက်အချို့စစ်ဆင်ရေးလုပ်ဆောင်။
အို (၁) ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာကအမြဲတမ်းအာကာသကိုပဲသုံးတယ် 256 အရွယ်အစား။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဇာတ်ကောင်ချင်းစီ၏ကြိမ်နှုန်းနှင့်အညွှန်းကိုသိမ်းဆည်းထားသည်။
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား String အင်တာဗျူးမေးခွန်းများ Tags: အမေဇုံ, Apple, ဘလွန်းဘာ့ဂ်, လွယ်ကူသော, Facebook က, Goldman Sachs, Google, hash, တားဆီးခြင်း, HashMap, Microsoft က, Oracle က, ကြိုး, Zillowpost navigation
Concatenated Decimal String ထဲမှာ Nth Character